Inona ny AWS Certification? Lisitry ny fampianarana amin'ny AWS | ITS Training
Inona ny fanamarinana AWS?
Lisitry ny Courses & Fianarana momba ny AWS
Mikarakara ny AWS:
AWS Fanomezana mari-pahaizana momba ny Associate & Fianarana fanofanana momba ny Solutions Architects, Administrators & Developers. Innovative Technology Solutions dia manome mari-pahaizana Professional ho an'ny Architects Solutions sy DevOps ho an'ny AWS.
Ny fandaharam-pianarana AWS Business Essentials dia natao hanampiana anao hahatakatra tsara kokoa ny rahona AWS, miaraka amin'ny tanjona fa ianao dia vonona kokoa handinika sy hampivelatra ny paikady mifantoka amin'ny rahona. Ny fandaharam-potoana dia miresaka momba ireo fototry ny AWS sy ireo onjam-peo momba ny raharaham-barotra raharaham-barotra ho an'ny orinasanao, anisan'izany ny fiarovana sy tombontsoa mifandraika amin'ny vola. Izy io dia manolotra rafitra ho an'ny famokarana rahona mahavokatra, miresaka momba ny fiovan'ny toeram-piasana IT sy ny fividianana, ary ny famerenana ny fomba ahafahan'ny AWS manova ny famerenam-bola amin'ny fitantanana ny IT. #AWS Training
Ny AWS Certified Solutions Architect - Ny fanadinana Associate dia natolotra ho an'ireo olona manana traikefa amin'ny famolavolana fampiharana sy rafitra azo zaraina ao amin'ny sehatra AWS. Ny hevitra fanadinana tokony ho takatrao amin'ity fanadinana ity dia ahitana ny: Famolavolana sy fametrahana rafitra azo avaozina, mora azo ary diso amin'ny AWS. #AWS Certification
Ny famoronana ny AWS dia mandrakitra ireo fototry ny fananganana fotodrafitrasa IT amin'ny AWS. Ny fandaharam-potoana dia natao hanehoana ireo mpanamboatra fandaharam-potoana amin'ny fampandrosoana ny fampiasana ny AWS Cloud amin'ny alàlan'ny fahafantaran'ny AWS sy ny fomba ahafahan'ireny serivisy ireny amin'ny rafitra miorina amin'ny rahona. Ity fampianarana ity dia manamafy ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny AWS sy ny ohatra asehon'ity drafitra ity mba hanampiana tsipiriany tsara ny fomba fandalinana ny fandaharana IT tsara indrindra amin'ny AWS. Ny fanadihadiana eo amin'ny sehatra rehetra dia manasongadina ny fomba nanambaran'ireo mpanjifan'ny AWS ny rafitra sy ny teknika sy ny tolotra azony. #AWS Training Course
Nahoana no zava-dehibe ny fanamarinana ny AWS? AWS mpahay siansa nahazo mari-pankasitrahana amin'ny Dollars